Noma ubani kakhulu ukude ezihlobene izwe ifilimu, uyazi ukuthi ubani Andron Konchalovsky. Biography ukuphila siqu, abantwana umqondisi kanye screenwriter ihlala ingaphansi ukulalelisisa yabezindaba abafundi emhlabeni wonke.
Rhode Mikhalkov-Konchalovsky - omunye omdala futhi abahlonishwa kakhulu eRussia. Kusuka emlandweni walo kuya kweleshumi xv, ihlanganisa elingenamikhono izingalo Romanovs, Tolstoy, Pushkin futhi Odoevsky. Mikhalkov ingeyamakhosi emibuthanweni ahlukile, eduze kwenkosi. Konchalovskiy Andron, ogama biography izokwethulwa ngezansi, yazalwa ngo-08.20.1937. manje 79.
He is eyizibulo umbhali izingane ezidumile sika Sergei Mikhalkov (1913-2009). Anakho umzalwane - Nikita Mikhalkov, ngubani Androna ngesikhathi eneminyaka engaphansi kwengu-8. Umama wabo Natalia Konchalovskaya (1903-1988). Daughter of umbhali eyaziwa ngokuthi umqambi wezinkondlo ezivelele kanye umhumushi. Ngasohlangothini Mikhalkov abazalwane kamama a Catherine udade (umfelokazi umbhali Yuri Semenov).
Ngiseyingane, bavame wachitha isikhathi endlini kakhokho wakhe uPyotr Petrovich, umculi odumile. Uye wakwazi ukugcina isimo senkathi nokunyamalala, umculi eqoqwe abameleli best of nezazi zangaphambi wamavukelambuso. Andron Konchalovsky, biography, empilweni yakho lapho engaqondakali ngaphandle izimpande zawo, kuyinto umzukulu umculi Vasily Surikov.
Ngokuvamile kuphakama umbuzo: kungani abazalwane bangaba izibongo ezahlukene? Impendulo itholakala ubuhlobo eziyinkimbinkimbi ne owamazibulo kayise. Nokuba umuntu ofuna ukuphelela, ube nesandla esivulekile, egxilile, Andron kubhekwe umsebenzi umzali sezombusazwe kusukela ipeni, ukuvunana isipho sakhe senkondlo. Kusukela umuzwa umbhikisho ke yashintsha igama lakhe. Igama lakhe langempela - Konchalovskiy Andrey Sergeevich. Abangane bavame wambiza Andron, futhi leli gama sahlala naye ekuphileni.
Kuyo yonke le minyaka, kuze kube sezingeni lokuba abe sengqondo izwe kuyise yaqala ukushintsha. Andrew S. eside libabiza ku-asebenza, azi ukuthi akukho isikhundla ekhethekile akukaze aphethwe, futhi iqembu weza kakade 60s. Ukuba nombhali ingoma wezwe kazwelonke, uSergei Vladimirovich kwaba behlonipha abo bonke ababusi bomhlaba, ungenzi lutho le njongo. Esabela imvelaphi yakhe ahlukile, usanda kwaba baqaphe njalo. Ngemva kokushiya ukuphila Konchalovsky linqoba umuzwa kamama ka fb kuyise, kaningi wasebenzisa nesibongo double, Mikhalkov esendleleni iphasiphothi.
Biography Andrei (Andron) Konchalovsky: Ekwenzeni umsebenzi
Kusukela ebuntwaneni, le nsizwa uyakuthanda umculo. Kuphothula esikoleni samabanga aphakeme, futhi ke School of Music. Adume Lev Oborin Sisikisela wangena eMoscow Conservatory, ogama iseluleko nsizwa yathatha ngo-1957, njengoba ayeke wafunda iminyaka emibili upiyano. Wabe nitinikele ukuzama ngokwabo kule mkhakha, okwamholela ekhanda. Waya VGIK at Ukuqondisa uMnyango, okuyinto amaphuzu eshabhu lakhe Mikhail Romm. Kakade 1962 wathatha iziqu umsebenzi "Umfana ijuba" umklomelo umklomelo-Venice Film Festival for DEBUT ifilimu.
Phakathi neminyaka ayichitha umfundi u-Andrew uthembele kumafilimu ezintathu, co-wabhala script for ifilimu "Ukukhuluphala Ivan" by A. Tarkovsky, ukukhetha njengoba umsebenzi mqondo ka Aitmatov "UMfundisi Okokuqala". Umxhwele umsebenzi Kurosawa, umqondisi wadala ifilimu ngesitayela zalo, indondo ye eziningi imiklomelo ngamazwe. Lokhu kufakazelwa ukuvela kazwelonke ifilimu umkhakha into entsha ebizwa nge Andron Konchalovsky. Biography umqondisi okwamanje akuveli entweni komunye onqobayo.
Shot ngo-1966, lo mdwebo "Injabulo Asya sika," walala phezu eshalofini. Moviegoers uzobona kuphela ngo-1988. Njengoba sebezinikele kule amafilimu eziningana indaba zakudala, umqondisi ngo-1974, kuletha izilaleli musical "Romance we Lovers" umculo Gradsky. Kwaba impumelelo enkulu. abantu abayizigidi ezingu-40 zatheleka amabhayisikobho, futhi umkhosi Vary, ifilimu waklonyeliswa "Crystal Globe".
Nenzenjani Konchalovsky? Andron, ogama biography kuchazwa amabhuku ayo ( "okuphakamisa inkohliso," "okuphansi Iqiniso"), abona kutsi eduze kuleli zwe kanye namaphupho ekunqotshweni Hollywood.
Ngo-1980, washiya eSoviet Union, lazenza nemigomo ephakeme kakhulu. 90 U-Andrei ubuyela ezweni ebhodini. Omunye ambalwa wayengeke akwazi baqashelwa phesheya, ukuthatha off ku okungcono US ifilimu studio inani amafilimu yimpumelelo. "Abathandi uMariya," "Runaway zemininingwane", "uHomer Eddie" Isenzakalo esidume kunazo zonke kwaba movie ashisa izikhotha "Tango futhi Cash" uRussell K. futhi S. stallone.
Abesifazane ekuphileni kwakhe
Konchalovskiy Andron, ogama biography kuyohlale kuntula uma ngingenaye indaba yothando lwakhe izindaba, kwadingeka izindaba nge abadlali abaningi abadumile bangesikhathi sakhe: Zhannoy Bolotovoy, Marianne Vertinskaya, Irinoy Kupchenko, Natalia Andreichenko, Elenoy Korenevoy. aye Hollywood kwaqondana ugqozi Shirli Makleyn. Kamuva ekuphileni kwakhe kwaba inimitable Kim Harris futhi Zhyulet Binosh. Konke amabhayisikobho akhe - indaba uthando emazingeni ahlukahlukeneko wendlela ukuphila nasesimweni sengqondo ezahlukene umlobi.
Umqondisi iye ngokusemthethweni washada izikhathi ezinhlanu. Isigwebo yokuqala ayenza emuva ngo-1957, umfundi ballet esikoleni Irine Kandit. Lo mshado lidume ngokuba Andron Konchalovsky, biography, ukuphila siqu eyayibonakala leaked emaphephandzabeni, aphume umhawu ushaye ngqo umakoti ngesikhathi somkhosi. Umshado yathatha iminyaka emibili, ngemuva kwalokho unkosikazi waya A. Zhyuraytisu.
Umkakhe wesibili, owaba unina wendodana yakhe yokuqala egor (1966 k.), Natalia Arinbasarova izinkanyezi ku mqondo yakhe ifilimu. Nge Kazakh ballerina umndeni kwakukhona ezingqubuzana kakhulu lapho ikhanda weRiphabhulikhi uqobo wangenela D. Kun. Ngo-1966, yena wadlala umshado ezinomsindo.
Lo mshado eyathatha iminyaka 4 ke umqondisi engu-11 ubudala lalimisa ishade French Viviane Godet, owayehlala eMoscow emndenini esebenza ebhange French. Ngo-1969 unkosikazi wabeletha indodakazi, u-Alexandra. manje Le ntombi uhlala e-Paris futhi unezingane ezine.
Ngo-1987, emkhosini ifilimu nge Irina Martynova, TV ummemezeli, ngahlangana Andron Konchalovsky. Biography of abesifazane namuhla kulo lonke izwe eyaziwa. Kusukela eminyakeni eyisikhombisa ngomshado namadodakazi amabili azalelwa: Natalia (owathweswa iziqu esikoleni French nge-honours nokwamukela imfundo phesheya) no-Elena, umfundi GITIS.
Ngo-1996, umkhosi Sochi kwakukhona umhlangano Belarusian Konchalovsky actress Yuliey Vysotskoy, umehluko ubudala lapho eneminyaka engu-36. Washada umqondisi wakhe wajabula ngempela okokuqala umqondisi uye wamemezela lesembili umndeni izinkinga umsebenzi ekuphileni kwakhe. Lo mbhangqwana banezingane ezimbili: indodakazi Maria nendodana kuPetru.
Ngo-1997, umqondisi wathola mayelana nokuba khona kwamakamu indodakazi engumlanjwana Daria, 1980 p., Ngu actress Irina Brazgovki. Daria wamnika abazukulu abathathu. Ukuze izingane eziyisikhombisa uyise engcono - Konchalovsky.
Biography: umndeni umqondisi sika
Julia Vysotsky - a yimpumelelo actress kanye TV umethuli. Ngo-August, eseneminyaka 43. Nanguya nombhali eziningana ethengiswa kakhulu kunazo cookery kanye umsunguli we yokudlela nokupheka studio eMoscow. Umndeni uhlala emazweni amathathu.
E-Moscow, umqondisi odumile azizwa isidingo sabo, ne 2013th ephethe Film Academy "Nika". Uyaqaphela usezakhele igama njengomqambi umqondisi yaseshashalazini. Ngo asebenzayo 8 ukusebenza yayo, kuhlanganise opera 5. Konchalovsky wathatha 27 amabhayisikobho, ngokusebenzisa ezobuchwepheshe zanamuhla. indaba Christmas "The Nutcracker kanye igundane King" (2010) yenziwa nge-3D. Ukuphothula izindawo umqondisi eLondon imidwebo, lapho iminyaka engu-30 ukuze uqedele movie (ukufakwa, umsindo, imiphumela ekhethekile). Umndeni wakhe nakanjani lapho.
Ikhaya ethule kakhulu futhi ukhululekile kuyinto e-Italy Konchalovskiy Andron, ogama biography Kuyathakazelisa ngenxa umqondisi yokuphila esebenzayo. Kule nkulumo wachaza ukuthi isebenza ngayo zimo (ka 34) kanye izihloko (angaphezu kuka-100), bahileleke ezemidlalo, ezihambayo ngokukhethekile ngesithuthuthu. Ukuze yobudala bakhe Andrew S. isesimweni esihle.
Le ngozi e eningizimu yeFrance
Ngo-2013, imoto aqashiwe Mercedes, okuyinto Konchalovskie baya eningizimu yeFrance, ngikutholile bese kuba nengozi. Beshayela kwaba umqondisi yena. Naphezu kweqiniso lokuthi umthelela ngesikhathi ukushayisana frontal weza emotweni umshayeli, buzilimaze oneminyaka engu-14 ubudala indodakazi Masha, hhayi esigaxe amabhande esivikelo emotweni. Le ntombazane ngendiza enophephela emhlane ngayiswa esibhedlela Marseille, lapho busuka equlekile. Ngo-2015 kuye kwaba khona ukuthuthuka ekwelashweni kwakhe, kodwa kuze kube manje uneminyaka equlekile. Odokotela abakulindele lokhu kwakuyoba nomphumela omuhle e-2017.
"Ngangijabule ngempela Okthoba 2013th" - uthi Andron Konchalovsky. Biography ukuphila siqu, abantwana baqondiswa namuhla Kuxoxwa umongo inhlekelele edabukisayo. Ubaba azizwa wecala okukhulu, futhi okuwukuphela kwethemba we amadodakazi elulame ngokuyisimangaliso umvumele ukuba uphile futhi usebenze kanzima.
Amabhayisikobho best mayelana zothando
Umlingisi u-Alexei Smirnov: Biography, empilweni yakho, ama-movie
Ihlathi Mouse - wukuthi isilwane?
Injani Eurasia izwekazi ngokuhlobene nezinye. Uhlolojikelele
Uyini ngokuchofoza umehluko ku amagundane? imphawu letibalulekile
Uma uqala 3 senyanga yokukhulelwa? Yini ngesonto yokukhulelwa, yokuthathu yesithathu luqala nini?
Ubuchwepheshe Simoronskie. Simoronskie imicikilisho yokusebenzelana ekugcwalisekeni isifiso
Itshe izakhiwo shungite: isipho Umhlaba noma kwenye iplanethi?
Izinqubo okumelwe Coffee "Abrekafe": umthengi Izibuyekezo
Floating exchange rate - lena nokuthi sisho ukuthini? I Izingozi elintantayo exchange rate?